Indomethacin lehibe indrindra Api, Amoxicillin Trihydrate - Tecsun
APIS MOMBA NY FANOMPOAN'NY OLOMBELONA
Enzimme NSP & anzima marobe
Cefalexin Mon carbohydrate
Apetrakay amin'ny toerana voalohany ny mpanjifantsika sy ny kalitaony, manome mpanjifa izahay.
Mpanamboatra matihanina izahay. Manana traikefa ara-teknika mandritra ny 10 taona
Nametraka masoivoho manerana ny rafitra mpiara-miasa manerantany izahay.
nanangana ekipa tena tsara izahay, izay mahay sy manana traikefa amin'ny milina.
TECSUN PHARMA LIMITED dia orinasa mitambatra niorina tamin'ny 2005.
Ny sehatry ny asa aman-draharaha TECSUN dia misy ankehitriny ny fampiroboroboana, ny famokarana ary ny marketing ny API, ny fanafody fanafody Human sy veterinary, vokatra vita amin'ny fanafody vetivety, additives amin'ny feed ary Amino Acid. Ny orinasa dia mpiara-miombon'antoka amin'ny orinasa GMP roa ary koa nametraka fifandraisana tsara amin'ireo orinasa GMP mihoatra ny 50, ary manatanteraka ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 manatsara sy manatsara ny rafitra fitantanana sy ny rafitra fitokisana kalitao.
Ny laboratoara afovoan'ny TECSUN dia natsangana ary natsangan'ny oniversite malaza telo hafa eo an-toerana ankoatry ny TECSUN tenany, izy ireo dia University Hebei, University of Technology Hebei, University of Hebei GongShang.
Aiza ny sehatry ny asa aman-draharaha eto aminay: hatreto dia nanangana rafitra mpamatsy prosy any Algeria, Egypt, Iran, Afrika atsimo, India, Malezia ary ireo firenena Azia atsimo atsinanana izahay. Any amin'ny Moyen Orient sy Amerika atsimo ihany koa. Manana mpiara-miasa sy mpanjifa marobe izahay.
1.CAS#: 54029-12-8 2.Molecular formula: C12H15N3O3S
Ny otrikaina C, fantatra koa amin'ny anarana hoe ascorbic acid, dia sakafo mahavelona tsy azo vonoina. Ny olombelona sy ny sasany o ...
Mahazo an'i USFDA i Strides ...
Nanambara i Strides Pharma Science Limited (Strides) androany fa ny fidinana an-tsakany sy an-davany dia manana ny subsidi ...
Rm 1413, Bldg A, Jinyuan Commercial Plaza, No. 152 Road Huaian Atsinanana, Yuhudistrict, Shijiazhuang 050031 Sina